မကျေနပ်သူတွေကို Network ထဲကနေ ပိတ်ပစ်မယ်.....ဟင်&#41 — MYSTERY ZILLION
မကျေနပ်သူတွေကို Network ထဲကနေ ပိတ်ပစ်မယ်.....ဟင်&#41
November 2008 edited December 2008 in Networking
ကျွန်တော့်ရဲမူရင်း Post မဟုတ်ပါဘူး.... Problemclean က ... web moderator ကြီး ကိုနေစေး ရဲ့ post ကို ကောင်းမယ်ထင်လို့ ... Share တာပါ ... ကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ထားပြီး လုပ်နိုင်ကြပါစေ.....(G-talkbomer ဆိုတာကိုလည်း သတိထားကြပါဦး)...
ကိုယ့် Network အတွင်းမှာရှိတဲ့ တခြားကွန်ပျူတာတွေကို
ထိန်းချုပ်တဲ့နည်းတွေ မြောက်မြားစွာ ရှိပါတယ်။
တခြားကွန်ပျူတာဘာလုပ်နေတာကအစ ထိုင်ကြည့်လို့ရတဲ့ Program တွေလည်း
အခုတော့ တခြားကွန်ပျူတာတွေမှာ သုံးနေတဲ့ Program တွေကို
လှမ်းပိတ်တဲ့နည်းလေး တင်လိုက်ပါတယ်။ တစ်ခုလောက်တောင်းဆိုချင်တာက
ဒီနည်းလမ်းကို အသုံးချပြီး သူတစ်ပါးကို အနှောင့်အယှက်မပေးပါနဲ့။
၁။ ပထမဆုံး Command Prompt ထဲ ၀င်လိုက်ပါ။
၂။ တခြားကွန်ပျူတာမှာ run နေတဲ့ Program list ကို ကြည့်နိုင်ဖို့
tasklist command ကို သုံးရပါ့မယ်။ Parameter တွေ ခံရပါမယ်။ tasklist /s
computername လို့ ရိုက်ပါ။ computername နေရာမှာ ကိုယ်ဆက်သွယ်မယ့်
ကွန်ပျူတာရဲ့ name ကို ထည့်ရပါမယ်။
၃။ ဒါဆိုရင် အဲဒီ ကွန်ပျူတာမှာ run နေတဲ့ program list တွေ ပေါ်လာပါပြီ။
၄။ လှမ်းပိတ်နိုင်ဖို့အတွက် taskkill command ကို ထပ်သုံးရပါ့မယ်။
၅။ taskkill /s computername /im programname ပါ။
၆။ programname နေရာမှာ ပိတ်ချင်တဲ့ program name ကို ရိုက်ရပါမယ်။ ဥပမာ
ခဏလောက် စောင့်ကြည့်ပါ။ ပြီးရင် အဲဒီကွန်ပျူတာ ကိုင်တဲ့သူ ငါ့ကွန်ပျူတာ
ဘာဖြစ်သွားတာပါလိမ့်ဆိုတဲ့ မျက်နှာကြီးကို စပ်ဖြီးဖြီးနဲ့
There is another way that can do in GUI mode and much more easier.
do it as follow
Right click my computer and click manage
Right click Computer management (local) and
Click Connect to another computer
Type computer name that you want to control or IP address of the computer
Computer management (your type computer name or ip address)
On the right side you will see current opening files of the computer user
Right click on the files and close open file and
then the file will close immediately.
This isabrief for beginners and can doalot from here.
tasklist /s computername ကိုတကယ်လုပ်ကြည့်တော့ မရဘူးခင်ဗျ ERROR: The RPC server is unavailable တဲ. (အဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လို့လဲ trace လုပ်လိုက်တော့ Windows Firewall ကြောင့်) ။ OK, firewall ကို off လိုက်ပြီးစမ်းကြည့်တယ်၊ "Type the password for ......." စာကြောင်းကြီးပေါ်လာပြီး password တောင်းတယ်။ ထားလိုက်ပါတော့။
နောက်ဆုံး tasklist ကို tasklist /? ဆိုပြီး help file ကိုကြည့်လိုက်တော့မှ ဘယ်လိုလဲဆိုတာသိတော့တယ်။
C:\_>tasklist /s [Computer name or IP address] /u [User name]
အဲ့ဒီလိုရိုက်ထဲ့လိုက်မှ user ရဲ့ password ကိုတောင်းတယ်။ တကယ်လို့ အဲ့ဒီ computer ရဲ့ user account တစ်ခုခုကို မသိရင်မရပါဘူး။ Administrator level account ကိုသိရင်တော့ taskkill ပါလုပ်လို့ရတယ်။
ခပ်အအ user သုံးနေတဲ. computer တစ်လုံးကိုတောင် Firewall ရှိနေရင် windows မှာ built in ပါတဲ. program တွေကိုသုံးပြီးဖောက်ဝင်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ (ခင်ဗျားမှာ ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ. special program တစ်ခုရှိရင်တော့ ဖြစ်နိုင်မှာပါ။) တစ်ခြား computer တစ်လုံးကို network ပေါ်ကနေ ဖောက်ဝင်တာ ထင်သလိုမလွယ်ပါဘူး။
EiEiYgn wrote: »
အဲ့ဒါလည်း တကယ်လုပ်ကြည့်တော့ remote computer ကို join လို့ရပေမယ့် ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးခင်ဗျ။ Share Sessions ကိုကြည့်တာတောင် Access Denied တဲ.။ တခြားဟာတွေလည်းဒီလိုပဲ Access Denied!
မအိရေ ... mm လိုလေးရေးဖို့ try ပါဦး။ တိုက်တွန်းတာပါနော် ... အချင်းချင်းဆရာမလုပ်ပါဘူး ။... :5:
ကျနော်လဲ mm font မရိုက်တတ်ဘူးဗျ။ but mm font ကမှ ဖတ်ရတာအဆင်ပြေတော့ ဒီလိုပဲ ၁ လုံးချင်း ကြိုးစားရိုက်ရတာ ... ခုတော့ တော်တော်တောင် သွက်လာပြီ ...
ကျနော် MZ ၀င်တာ ပညာတိုးယုံတင်မကဘူး ... mm typing ပါသွက်လာပါတယ် ခင်ဗျားးးးးးးးးး ):)):))
ajminn207 wrote: »
Argument လေးတွေပါလာရင် ... ပိုပျော်စရာကောင်းတယ် ... ပိုပြီး စုံစုံလင်လင် သိရလို့ ...
တကယ်တမ်း ကျွန်တော်ဒီလိုပြောတာက တိုက်ခိုက်ချင်တဲ. ငြင်းခုံချင်တဲ့ သဘောနဲ့ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်လုပ်ကြည့်ပြီး ရေးထားသလိုဖြစ်မလာတဲ့ အခါပေါ်လာတဲ့ စိတ်နဲ့ ရေးလိုက်တာပါ။ ပြီးတော့ အမှန်ကို တခြားသူတွေ သိအောင်လို့ပါ။
If I made mistakes in my reply, please forgive me. I am justababe in this Forum.
Aung Kyaw Minn
tasklist /s computername ကိုတကယ်လုပ်ကြည့်တော့ မရဘူးခင်ဗျ "type the password for ......." စာကြောင်းကြီးပေါ်လာပြီး password တောင်းတယ်။ ထားလိုက်ပါတော့။
ကျွန်တော်လည်း အဲ့လိုပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဆက်လည်းမစမ်းဘဲနဲ့ ဒီအတိုင်းထားလိုက်တာ အခုတော့ ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိရပြီ။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
work group ချိတ်ထားရင် အဲဒီလောက် မလွယ်ဘူးနဲ့တူပါတယ်ခင်ဗျား။
domain ထဲ၀င်လာရင်တော့ server ကလှမ်းပိတ်ရင် ရမလားမသိဘူး။
မှန်ပါတယ်။မအိကိုစော်ကားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တခါတလေမအိ post တွေကိုဘာသာပြန်ရမှာပျင်းလို့မဖတ်မိပါဘူး:Dဖြစ်နိုင်ရင်မြန်မာလိုရေးပါလားဗျာ။:67:
Yes I am sorry. My post works only in Domain Administrator mode. :71::71::71::71::D:D:D Because I am Domain Administrator. So I forgot to tell.
အမအိ Eng လိုရေးမယ်ဆိုရင်လဲ font size လေးနဲနဲကြီးပေးပြီး စာပိုက်လေးခြားပေးပါနော်။ မဟုတ်ရင် ကျနော်နဲ့ မျက်စိဆရာဝန်ရဲ့ သမီးနဲ့ညိတော့မယ်။:D
ဟဲ့ မအိက ဒီဆိုက်ပါပဲဟ။ နင့်မျက်လုံးက ဖြစ်နေတာ။ ဆရာဝန်နဲ့ စမ်းလိုက်ဦး။ တရုတ် သမားတော်တွေကို အပ်စိုက်ကုသနည်းနဲ့ မျက်လုံးကို ကုပေးပါလို့ပြော။ ယူပစ်သလို ကန်းသွားမယ်၊ အဲလေ၊ ကောင်းသွားမယ်။
OK so sorry. I will take care of my fonts size. For Mynamr Typing forgive me I am typing in english is much easier for typing in myanmar. :P:P:P:71::71::71:
ဟုတ်တယ် သူတို့ပြောသလိုပဲ မရဘူး။ User name & Password ရိုက်တောလဲ မရဘူးပဲ.
My computer က Mangament က၀င်တော့လဲ Access Denied ဆိုးပ ဆိုးပ :O
တခြားနည်းလမ်းမျာ းရှိရင်လဲပြောကြပါအုန်း :5:
do ya mean the AD???
it isn't2secure and ISA svr also has tons of vulnz.
(you can find it by using languard)
as the example
in last 1 n half years ago, i ranabackdoor @ac cafe located @ sanchaung
it's named treasurenet.
(although the owner of this cafe isaMCSE holder, he's justanoob)
(moreover, he always told that his ISA svr is reli secure and can'tbhacked)
(he denied most of things in his cafe even CMD and run and the restricted users can't do anything even installingasoftware. I reli hate it and decided to crack down the system:14:)
so, i hacked its AD via the network by using the restricted user acc.
I also changed the policies of ISA.
(you can go and test it)
(at that time, he reli didn't know abt that and his svr always knee down coz i invited the tons of viruses)
(but for now, he may reconfig and fix it coz it's 1 and half year long)
if you are fortunate, you can find it
အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် ဗမာ လိုလေး ရှင်းပြပါလားခင်ဗျား။
အပြင်က ပို့စ်မှာလည်း တင်ထားပြီးပါပြီ။
ကျွန်တော်လည်း စိတ်၀င်စားပါတယ်။ အဲ...ကျွန်တော်အဖြစ်ကတော့ ဒီလိုဗျ.
ကျွန်တော်တို့ဆိုင်မှာ ခင်မင်ရင်းနှီးနေတဲ့ user အချို့က Cafeprogram တစ်ခုကို ပိတ်ပြီးသုံးနေမယ်၊ ကိုယ်ကလည်း အားလည်းနာ....ပြောလို့လည်းမကောင်း၊ မကောင်းတော့လည်း...အာ..ရှုပ်ကုန်ပြီ။ သူတို့ကိုလည်း မပြောချင်ဘူးဗျာ။ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် သူ့စက်အလုံးကို server ကနေပြီး restart ချမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင်...
အကြံဉာဏ်လေး ပေးကြပါဦး။ Networking course တုန်းက လစ်ခဲ့တဲ့ အကျိုးတွေ အခုမှ ခံစားရတော့တယ် အဟီး...။(ငိုနေတာနော်)
I'm deadly stupid in MM typing
that'swhy i post in english
ကိုယ်မကျေနပ်တဲ့လူတွေရဲ. Yahoo Mail တို.G mail တို.ကိုလုံး၀ပိတ်ပစ်လို.ရတယ်တဲ့